Daawo: Askari Nin darawal ah ku dilay Muqdisho iyo Banaanbax ka dhashay.. | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Daawo: Askari Nin darawal ah ku dilay Muqdisho iyo Banaanbax ka dhashay..
Apr 13, 2019 - 18 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Isgoyska Howlwadaag ee magaalada Muqdisho Ciidamada Booliska ah ee ku sugan ayaa waxay saaka Dileen darawal Bajaaj la ah, waxaana wararku sheegayaan in muran uu soo kala dhax galay Askariga wax dilay iyo Darawalka la dilay.
Dilalka loo geysto darawalada Moota bajaajta ayaa muqdisho si caadi ah uga dhaca, iyadoona aysan jirin cid wax ka qabatay falalkaan soo laa laabtay.
Dibadbaxayaal ka caraysan toogashada uu Askarigu gaystay Darawal Mooto Bajaaj iyo qof la socday ayaa ka soconaya Isgoyska Howlwadaag ee Muqdisho.
Isgoyska ayaa gabi ahaanba xidhmay, waxayna Dibad baxayaashu gubayaan Taayiro.
Dhawaan ayay aheed markii Wiil Dhalinyara ah oo sidaan oo kale lagu dilay xamar jajab uu ka dhashay Banaanbax, ka dibna uu ka hadlay Gudoomiyaha gobalka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho C/raxmaan cumar Cismaan Yariisoow.
Alla how naxariisto.
Alshabaab ayaa dil joogta ah ula taagan.
Askartii badbaadin lahayd ayaa dil joogta ah ula taagan.
Kuwa ka badbaaday wexey u dhimanayaa gaajo ileen suuqa kama soo adeega karaan.
War shacabkaan loo tashadayoow maxaad sugeysaan.
Galmudug waydiiya. Waxa wax dilaya waa dawlada dadka lanacsiiyo. Mucaradka they don’t care nobady.
ilaahay how naxariisto ehelkisana samir hakasiiyo
hawiye madoobe ilaahay caqliga hau sooceliyp
Igaar caroole axmed.
Hawiye madoobe hadaad arki jirtay Hadda waxaa jiro hawiye cadde miyaadan ogeyn annaga iyo cadcadkii inaan isku milanay.
Wiil & abtigiis baa ladilay oo maydkoogu lays garab wadhay…dadka reer Mogadishu kaca oo mudaharaad waaweeyn sameeyaa iyo kacdoono oo jiidhaa VILLA SOMALIA iyo xeryaha AMISOM.
Raxiimulaah wiilka iyo abtigiis.
Wixii dhiig lahoow kaca…Dhamidiinba Wada Kaca!
kkkkkkkkkkkk mukulaal madaw baa yaabtey hadana korka ii saaran,xawadle cade iyo geel jecel yaa kacad ,cabsiye xasanley aha ayaan ahay
alshabaab waa dir waliba isaaq iyo biyamaal hawiye waa inuu wixii diir ah cagta mariyaa
Markii la bixinaayay magaca hawiye madoobe. Dadku miyeysan arki jirin Reer bariga.
weli bosaaso ma tagtay. Weligeey dadkaas. Dadka ka gagaaban oo ka mad madoow maan arag.
Qardho ka biloow waad aamineysaa in ay yihiin dhashii sansinbaar. Kkkkkkkj
kkkkk nacam meesha waxa kunool hadhaagii dadkii ladhoofinjirey kuwii xanuun sanjirey iyo yaryaraa ,ayaa kutarmey ,galan ayaa quustey
Banaanbaxyada muqdisho ka socdo oo sii xoogeystay. Saacadaha soo socdo waxaa laga yabaa in uu gaaro villa somaliya.
Dowladda isku sheegta naxli iyo nabsi waa guryaha loogu galaa.
Ilaaheyoow dadkeygu towfiqaan iskana dulqaadan cadowga xaasidka ah ee aargoosiga wado…
Reer muqdisho waa ka dhamaaday dulqaadkii.
Kasoo baxa guryaha gala xurumaha dowladda. Xarumaha amisom. Xarunta xalane.
Farmaajo 4 sano in uu dhameysto cebeey igu tahay.
Wuxu u soo baxay shaqadiisa balse Askarigi ilaalin lahaa ayaa dilay!!!
ilaa goorma ayaa la beegsanayaa kuwa dalkooda ka shaqeysta ee aan niyad jabin?
Maxaa tiri dad baa la dilay ee ha la kaco oo villa somalia. Danti yaqaan baa tahay oo halkaas jaanis baa idiin ka muuqday.
Safiirkii maraykanka ee somalia iyo somaliland bal noogu waran kkkkk
calaacal wax mataro e cadowga halayska celiyo Alshabaab mulateriga iyo bilayskaba
way kujiraan xitaa waxay kujiraan baarlamaanka ganacsataday kujiraan
waxa aargosadka ah waa cadowga Alshabaab o gabalkodu siidhacayo
@@oday Garqaad beryahan danbe waan kayaabay e adiguna ma kusaasad kamid tahay
qabyaalad guun ah baayaabtay haxanaaqin sxb inaasi waa kaftan maylasocotaa wiil Hiraab
Ilaahay haw naxariisto.
Reer Muqdisho meel dheer loogama iman ee iyagii uun baa is-dilaya.
Ciidanka Muqdisho jooga oo Argagax ka qaaday Qaraxyada iyo Iyagoo Darawalada Ku dilaya wooxoogaaga yar ee ay Soo Xoogsadeen inay wax uga dhiibaan.
GAR ILAAHAY BAY TAQAANAA.
MISE FARMAAJAA LAYNAYA????
BAAHI IYO DHISHBILIIN XUMO.
Garaad hadalkaaga waxaan ka fahmay. Ha xanaaqin.
Garaad xanaaq ma jiro waayoo anigu waxaan doono ayaan qoraa.
Aniga iyo adigu waxaan ku kala bedelay. Aniga waxaa i damqiyo dhibaatada shacabka lagu haayo. Markaa ayaa hadlaa oon dowladda ku tufaa. Laakiin adiga waxaa ku dhibaayo in dowladda wax laga sheego laakiin kuma dhibeyso kama hadashid dhibaatada shacabka waana taas midaan ku kala bedelanahay.
Ma wexey kula tahay dhibaatada taagan In shacabka lagu lagu eedo?
Qofkii geesigaa ahaa ee dalkiisa ka sheqeysanaayay ayaa waxaa dilay ciidankii dowladda ma waxaan ku eednaa alshabaab?
Garaad waxaad noqon rabtaa axmed somali oo kale waayoo isagu weligii kama hadlin dhibaato ku dhacday shacab somaliyeed. Meel kasto ha jogaane. Laakiin markii farmaajo lasoo hadal qaado wuxuu ku soo gelayaa isagoo indho la.aan ah. Hadana wuxuu ku dodaa in uu yahay qofka ugu Somalisan golaha. Somalinimadii waala kufsaday.
ilaahay kabaq walaahi maalin walba waan kahadla dhibta iyo xanquuqa haysata shacabka
maalin walba waxan iraahda qoriga halaqaato o halayska dhiciyo cadowga
sxb aniga farmaajo waxba igama gelin qabiilna ugu hiilinmaayo in ladhaliilo
o lakarbaasho xaqba loguleyahay somaalidu waxay ku maahmaahda nin
durbaan qaaday ilaaq dalbay kkkkk kelmedaas waxa isticmaala reer woqooyi
garanmaayo in xagiina laga isticmaalo ninku marba hadu yiraahdo madaxbaan noqonaya
waa ladhaliilaya waa lacayayaa wixi dhacaba masuliyadeeda isaga qaadaya lkn
ogoow waa shakhsi masuuliyadu dowlad iyo shacaba way ka dheaysaa hadaan lays kaashan
cadowga lagama adkaan karo anigu waxan aaminsanahay wax shacabka masaakinta ah xansuuqayaa
inay yihiin cadow kuso duulay in gacmaha lays qabsado o dhinac logaso wada jeesto
aytahay waajib saaran qof walba o somaaliya
sxb kuligeen waynu rabnaa dowlad dowladana qof maleh qabiilna maleh waynaga
dhexaysaa waynu ku khasbanahay inaynu dalka iyo dowladaba wada difaacano
dowlad la’aani waa waxa halkaa inadhigtay o sodon sano dhiigeenu u daadanayo
hadaynaan dowladeena lashaqayn sidaa uunbaynu kujiraynaa aakhirkana intaynu dhamaano
baa dalkena lala wareegi kkkkkkk caruurtenuna helimayso dhul ay inaga dhaxasho